जीप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, ३ जना गम्भिर घाईते ! - जीप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, ३ जना गम्भिर घाईते !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० असार, 06:30:40 AM
ओखलढुङ्गा । ओखलढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ जना गम्भिर घाईते भएका छन् । बुधवार विहान सुनकोसी गाउँपालिकाको मूलखर्क भन्ने स्थानवाट ओखलढुङ्गाको सदरमुकामका लागि छुटेको बा १५ च ८८४३ नम्बरको जीप च्यानमको भालदिप भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटना भएको जीप सडकवाट करीब ३ सय मिटर तल खसेको सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख रुद्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । घाईतेहरुको उद्धार गरि उपचारका लागि ओखलढुङ्गा अस्पताल तर्फ पठाईएको पनि उनले जानकारी दिए ।
मृतक एकको घटनास्थलमा नै र एक जनाको उपचारका लागि ओखलढुङ्गा तर्फ ल्याईदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको बताईएको छ । दुर्घटनामा परि घाईते भएका तिनैजनालाई उपचारका लागि सामुदायीक अस्पताल सोब्रुमा ल्याईएको छ । घाईते तिनैजनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ । घटनामा परि मृत्यु भएकाको सनाखत हुन सकेको छैन ।
घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ ओखलढुङ्गा प्रहरी ईन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा घटनास्थल तर्फ प्रहरीको टोली पठाईएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवम् प्रहरी नायव उपरिक्षक अनन्नराम शर्माले जानकारी दिए । प्रहरी घटनास्थलमा पुगेपछि घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारी आउने पनि प्रहरी प्रमुख शर्माले बताए ।
जीपमा कती यात्रु थिए भनेर केही खुलेको छैन । जीप दुर्घटनामा परेपछि चालक भने सम्पर्क विहिन रहेको बताईएको छ । जीप रोकेर बाँकी यात्रु खाजा खान गएको बेलामा जीप आफै गुडेर दुर्घटनामा परेको बताईएको छ ।
२०७५, २० असार, 06:30:40 AM
बाजुरामा जीप दुर्घटना : चालकको मृत्यु
डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना : एकको मृत्यु, आठ घाइते !